झुठ बोलेर नेपाल घुम्न पर्यटक नबोलाऊ ! - माइपोखरी न्युज
Home BLOG MAIPOKHARI NEWS झुठ बोलेर नेपाल घुम्न पर्यटक नबोलाऊ !
जापान । नेपाल सरकारले सन् २०२० लाई पर्यटन वर्ष मनाउने घोषणा गर्दै २० लाख पर्यटक भित्र्याउने महत्वकांक्षी योजना अघि सारेको रहेछ यो कदमलाई हामीले आ–आफ्नो ठाउँबाट सहयोग गर्नुपर्छ नै। नेपाल संसारकै पर्यटनमा प्रचुर संम्भावना भएको पर्यटकीय देश हो ।
हामीसंग सगरमाथासंगै मकालु, कञ्चनजंघा, लोत्से, चोयू, धौलागिरी, मनास्लु र अन्नपूर्ण जस्ता धेरै वाटा अग्ला हिमालका चुचुराहरु पनि छन्। एक सिंगे गैंडा हेर्न कहाँ पाईन्छ यो दूनियामा जो हामीसंग छ। हामीसंग झापा इलामका चिया बगान,पॉचथर भोजपुरका डाँडा उता माथि स्याङबोचे, भेडेटार,रुम्जाटार, हलेसी रमणिय त्यो जिरी यि पूर्वका घुम्नका लागि विशेष सुन्दर ठाउँहरु छन्। सिन्धुलीगढी,शैलुगं,दोरम्बा नमोबुद्ध,नगरकोट,दामन पालुगं यि मध्यपहाडका शान हुन्।
जानकी मन्दिर, गढीमाई तराईका भ्रमण गर्ने विशेष ठाउँ हुन्।पश्चिमतिर पाईलै पिच्छे रमणिय स्थानहरु छन्। पोखरा गएपछि साच्चिकै प्रकृतिको उपहार हामीलाई प्राप्त भएको छ भन्ने भान हुन्छ। मन एकोहोरो र शान्त बनाउछन् । रारा,तिलिचो,चाँदनी दोधारा,स्वर्गद्वारी ती हाम्रा पर्यटकीय क्षेत्र हुन।अग्रदूत भगवान गौतम बुद्धको जन्मभूमि पनि हो। जलश्रोतको कुरै नगरौ खोलानाला झरना प्रकृतिको अनुपम उपहार हामीलाई प्राप्त छ। पोकली,पातले छागामा एकचोटी पुगेपछि सायद स्वर्ग भन्ने नेपालमै छ भन्ने हरेकले महसुस सहजै गर्न सकिन्छ।
सयौ भाषा,भेषभुषा,रितिरिवाज रहन सहन यी हाम्रा चिनारी पहिचान नै हुन्।भौतिक पुर्वधार विकास पहिलो प्राथमिकता हो।सार्वजनिक शौचालयहरु छैनन्। फोहोर ब्यवस्थापन छैन ।मुख्य पर्यटकीय स्थान बौद्धको सडक हिंड्नै नहुने भएको वर्षौ भयो टाढाको त के कुरा गर्नु काठमाडौ वरिपरि कै स्थानहरुमा सडक राम्रो छैन।
बस्ने खाने राम्रो ब्यबस्थापन छैन पानी पर्दा हिलाम्मे घाम लाग्दा धुलाम्मे खाल्डाखुल्डी र प्रदूषण राजधानी देखेर नेपाल आउन लागेका पर्यटक कति मख्ख पर्लान? सामाजिक सञ्जालमा भिजिट नेपाल भन्दैमा कति आउछन् घुम्न नेपाल पर्यटक ? पर्यटकलाई सुलभ सेवा सुबिधा पनि दिन सक्नुपर्यो । घुम्न आउने भनेको आराम मनोरञ्जन केहि त सिकेर जाने उद्धेश्य नै हो।
अग्लो गोरो विदेशी देख्न साथ २० रुपैयाँको पानीलाई १०० रुपैयाँ भनिदिने।घुमाउन जादा विभिन्न बाहनामा अनावश्यक बढी चार्ज उठाउने। २ दिनको यात्रालाई १ दिनमै पार गरिदिएर फाइदा उठाउनेहरुलाइ नियन्त्रण गर्न सक्नुपर्यो।केहि समय बौद्धमा १ जना जापनिज पर्यटकको २ लाख नगद चोरी भएको समाचार सुन्नमा आएको थियो। यस्ता घटनाहरुले सुरक्षामाथि प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ।सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन सक्नुपर्छ ।
गौतम बुद्धको जन्मस्थानमै बुद्धका मूर्तिहरु तोडफोड हुन्छ । हरेक साँझ लुटपाट चोरी डकैती यी हाम्रा नियमित अखबार हरुका ताजा समाचार हुन्।आज विश्व सामाजिक सञ्जालले जोड़ेंको छ।छिनभरमै समाचार फैलिसकेको हुन्छन्। पर्यटकलाई आकर्षण दिने भनेको नम्रता शिष्टाचार हो।तर हामी वीर गोर्खाली झुक्ने कुरै हुदैन ?
बिमानस्थलमा ओर्लिएपछि थाहा हुन्छ देशको अबस्था कस्तो छ भनेर। विदेशीहरुलाई यो पनि राम्रोसंग थाहा छ नेपाली आकाश असुरक्षित छ भनेर । भुकम्पले हल्लाएको ४ बर्ष भयो मठमन्दिरको भौतिक संरचना अझै उठेकै छैनन्।लम्पसार परिरहेकै छन्।
भिजिट नेपालको लोगो राख्दैमा १० लाख मान्छेलाई विमानस्थल उध्घाटन गर्न बोलाएर पर्यटक आउनेवाला छैनन्।पाहुनालाई उचित स्वागत सत्कार गर्न सकिएन भने भएको ईज्जत पनि पानीमै बग्ला। बुद्ध र सगरमाथाको देश घुमौ भनेर कति झुठ बोलेर बस्ने हामी ?
(रामेछापमा जन्मिएका लेखकबुढाथोकी हाल जापानमा बसोबास गर्दै आएका छन् )